Banks mutoro kana zvokudya muzvitoro anoshandiswa se "mapazi". Trading kwakamanikidza angera bhenga pasina kugamuchira muripo kana kuti mikana kana ukawedzera mari. Pemahombekombe kuzviruramisa nemapazi pamahombekombe zvichava nani kuti nzira. Chii havaiti kutaura ndechokuti shoma ngozi kuti vose kunze mabhanga pachavo. Hapana mumwe boka iri sezvo udyire sezvo mabhanga. Bank hofisi nani kupfuura zvakachengetwa. Uyezve, bhengi akapakatira Kwairatidza chete chikamu zvachose zvitete. Mashoko kubva 2011 kwakaratidza kuti bhangi akapakatira chakaita kuti chete pfuurei shanu muzana akapakatira zvavakaita zvitoro uye mabhanga. Mazuva ano zviri zvakare mari unonyatsoruramisa wakakotsekana mari mukugadzirisa nemabhangi kuti tsika hazvibviri kuita kubhengi ugororo.
Anonzi Ica kubhengi haisi mubhengi chaiye, uye hakuchazovipo kana. Izvozvo zvinongofanana nokushandura mazuva Coop ishamwari.
Havana mapazi uye "Muzviitiko kubhengi" vakapfurwa mu yakaipisisa nyaya chete nokuda Internet kana runhare. Kunyange zvazvo Ikea ine yayo anonzi rwezvemabhengi. Vose ICA uye Ikea uyewo ngaateme makadhi avo. Mienzaniso guru Swedish makambani kuwana simba pamusoro muripo enyika. Vatengi vari dzimwe nguva zvinenge achipemha kuwana mari yakakwana Somuenzaniso, Formica counter. Hazvina zvakare haana kuwana mari pasina nemakadhi.
Chiitiko kuti tinzi kunyepedzera mabhanga apo Somuenzaniso, makambani inishuwarenzi uye hombe mabhizimisi necheni anoshanda sezvo mabhanga vakatanga pashure zvemari dambudziko iri 90 apo mbiri bhizimisi rakanga deregulated. Hurumende kubhengi zvinovimbisa raiva ipapo uyewo makambani aya. deregulation ichi chaiva kuti mumwe liberalizing kuti zvisiri chinangwa kuwedzera makwikwi. Makwikwi pane zveupfumi kugadzikana uye runyararo. Vose ICA uye kadhi Coop akanga pakutanga hapana dhipoziti inishuwarenzi uye yakanga yakabatana kune anonzi nemari mabhanga. Makadhi aigona chete kushandiswa zvavo muzvitoro.
ICA Bank makuru Solna, Sweden, uye akagamuchira mamiriro pamahombekombe muna 2001. ICA bhodhi akasvika muna 1990. ICA Bank paakasvika pedyo ICA Customer nyore akashandura zita raro kusvikira ICA Bank. Zvinoratidza pachena Formica Kuda kutamba pamusoro kadhi. Chikamu mabasa ATMs. Ica vanyengedzwa Vatengi vakawanda kubva yakarongwa mabhanga kubudikidza dhipoziti sirin'i pamusoro 15,000 yakaguma uye kuti dzakakwirira kufarira prices. With Formica Debit Plus akapiwa dhisikaundi pamusoro kutenga uye mabhiri aigona kubhadharwa Indaneti nacho. MedMera Bank akawana mamiriro pamahombekombe muna 2007. nerokuti Ica kadhi rinonzi MedMera kadhi uye rinogona kushandiswa kadhi rechikwereti.
Pane guru Vakaomerwa kune makambani nemamwe pane mabhanga akapa mamiriro mabhanga. Ivo kakawanda, kana zvichibvira, kunyange kupfuura cashless cashless mabhanga. Kana iwe zvakasiyana ari okushambadza kuti Internet rwezvemabhengi, e -Proof yokuzikanwa uye kubhadhara mabhiri paIndaneti uye une rwakatsauka nomugumisiro. Somuenzaniso, dzinoratidza sei "nyore zvingava kubvisa yacho tsamba" kana pane zviri rinobatsira. Kune mamwe muupenyu hwezuva nezuva, zvingaita unorira ichi.
"Fungidzira kuti zvakakunakira kungava kusiya motokari pamba uye kufamba kushanda panzvimbo"
(Zvakanaka uye utano kuenda kubasa asi zvisiri panokwanisika)
"Yeuka kuti vadzivise dzamira dishwasher kana iwe kugeza ndiro namaoko"
"Regai Nemiwo kudzivisa wokuwachisa uye kugeza ane yemapuranga netsvimbo iri tabhu"
Uyu mitauro uye kushambadza-mwero bata uye runyoro musiyano wezvinyorwa mutauro counterintuitive pakati Orwell kuti yokufungidzira 1984. Kuti kutaura kuti munhu anoshanda uye nyore ndiko zvisamufambira uye seisingashandi.
Fully namanhede. Achitaura e-IDs kuti anoshandiswa zvikuru paIndaneti sezvo vaya nechokuita mhosva dzakaipisisa. A nhamba yokutungamirira vanamuzvinabhizimisi akafumurwa kuti kubiridzira ari mamiriyoni apo vaishandisa e-IDs kubva Telia pamwe Swedish Mutero Agency uye mamwe makambani.
Pasinei nani vanhu vakawanda vawane zviri barskrapat akaundi pakupera mwedzi unouya. Unogona kuponesa nyore kanenge zvishoma mari pamwedzi, kunyange vaya vane zvakaipa yakatarwa. Pasinei murombo uri saka unogona kubvisa $ 100 pamwedzi kusvikira buffer pamusoro vashoma madhora mazana ndiko kushandisa. With buffer ichi hamufanirwe kumiswa kugara sei dzakasara munhoroondo. Kuchengetedza pakutengeserana uye iri nyore bhuku mari anongoti nanga-nanga kana wadzoka. Sarudzai bhanga chaiyo uye duku buffer pane kugara vachiongorora nyaya iri paIndaneti mubhangi kana risiti kubva ATM.
Pemahombekombe kuti ndivo vakawanda vanoedzesera vakachena cashless Internet mabhanga. Achitaura kwemhosva kwave iya kubva wakachena kadhi mhosva kuti zvigumbuso chokuita paIndaneti rwezvemabhengi. Asi kakawanda kwete kuti kubhangi iri pachena kuti mhosva. Zvirongwa bhowa rinonzi Trojans vanogona hanya nda kupinda kombiyuta yacho rokushandisa. Vanoshanda vari kumashure uye anotumira pasiwedhi kuti kombiyuta Server. Criminal vaishayiwa muna iyi kunyange chokuita pachavo pamwe makadhi nyepera. The mhosva kunogona kutora nzvimbo kushandisa zvachose kombiyuta kushandisa michina asiwo zvinoreva kuti zviri nyore kuwana zvisaririra payo. Asi kunyange muchiitiko ichi pane munhu anonzi saka goalkeepers iyi nyaya anopa nhoroondo yake mhosva kushandiswa.
Kazhinji vemhosva kadhi vamwe vakatosvika kuita paIndaneti rwezvemabhengi mhosva. Muenzaniso mumwe Trojan riri A311 Death anonziwo Haxdoor. Trojans dzinoparadzirwa e-mail. Banking Login peji chokuita Trojan zvichishandiswa yakagadzirwa nounyanzvi kuti hapana musiyano anofanira kuonekwa pamusoro chaiye. A yakakura mari inogona kutorwa kubva munhoroondo kunyengerwa kutenga chero chigadzirwa paIndaneti. Trojans vanotengeswa paIndaneti uye anogona kuva mari kuti rinoenderana huenderane imwe bhengi. All zvina zvikuru Swedish mabhanga kunge anosakadza.
The chete bhangi kuti mumwe zana muzana ndiye Swedish Riksbank. On Website kwayo unogona kuverenga, zvisinei zvichida nhema chikuru kuti kwave rakanyorwa chero State Swedish.
"The National Bank haana kudzora sei mari inoshandiswa munyika, asi inotongwa yavose kudiwa."
bhangi pemahombekombe 'Kana vanofanira kutora basa uye matanho uye nzira kuitira kuti vamwe nemabhengi munharaunda anobvumira veruzhinji kuona sei mari zvikuru muchida kushandisa. Kodzero yokushandisa mari, maererano General Nemazano National Bank "madiro., pane Mhedziso." Izvi zvinoreva pamaitiro zvinonzwisisika Swedish anotevera. Kana kunze chitoro inoti "hapana mari" saka mutengi wakapinda chibvumirano kontantlöshet kana ari muchitoro. Kodzero kushandisa mari Saka kushanda chose mukanwa.
Wokutanga akanga Riksbank chete ndiye anokonzera mari zvakanaka. Munguva 80s uye 90s vakatevera rationalization uye kunyatsoshanda (verenga impairments) pakati pezvimwe zvinhu kwakaguma kuvhara mahofisi naGavhuna wacho. Kwemakore dzaiwanika imwe kambani kuti zvinhu zvaizokanganisa kufunga profitability uye mutengo nemari. Rainzi Money muSweden (PSAB). Kambani akava Fiasco zvemari uye yakavharwa muna 2004. Zvadaro pari deregulated maitiro akauya. Sarudzo iri deregulated maitiro iine midzi muna Executive Board. The Riksbank akanga zvino chete chikamu chayo dzekare mashoko yakanga chomurume mahofisi maviri Tumba uye Mölndal. Kwakasarudzwa muna 2013 kuenda akavhiyiwa kuti chete muhofisi Broby uyo chete kubata Banknotes. Full mari zvakanaka akasvika dzinovangira ne private kambani.
Pasi Act, iyo Riksbank vanofanira 'anosimudzira vakachengeteka uye vakarongeka kubhadhara uye anokonzera nourongwa Euro manotsi uye mari. " Tinofanira kutora sezvariri inofanira pachinzvimbo Riksbank unonyora bhuku rino apo Ndakakwanisa "nhema vari hamoku." Unoshamisika kana isu achawana akaenzana mugove private Reserve Bank muSweden uye US Federal Reserve?
More pamusoro unyengeri ari Riksbank uye kuzvipokanidza
Other nechepakati mabhanga pane Swedish vane netsvakurudzo kuti mari ndiyo imwe yakachipa pashiri nzira kuripira zvose vanhu nemabhizimisi. Kuwedzera yemagetsi kubiridzira kunopfuura mari kubiridzira. Security Transport Organisation está (European Security Transport Association) kare akaratidza akawanda apfuura kuti mari yakanga zvikuru nevanhu uye yakachengeteka nzira muripo mu Europe. Está akarayira kudzidza kugadzirisa nemabhengi kadhi makambani vaida kumanikidza zvachose kontantlöshet. Yakaratidza kuti yose kontantlöshet vakandorwa kuda vanhu uye ainzwa kuti vanhu pachavo aigona kusarudza sei vaida mari.
The Riksbank akasarudza kuisa pfungwa dzakawanda pamusoro kwezvivako uye rwokugadzira pachinzvimbo nevatengi kudzivirirwa. Consumer kudzivirirwa ave pachinzvimbo dzabviswa kuna kontantlösfanatiska FSA. saka vatengi vane chepakarepo hapana kudzivirira tichitarisa mari. Zvinoita sokuti Bere akanga adzidziswa kuti vabate Red akatasva Washington pokutanga. Mapere vane chete pachavo zvavanofarira mupfungwa.
Pane zviviri zvinokosha zvinoita kuti kuverenga pamusoro Riksbank kuti Website. Chokutanga, unogona kudzidza pamusoro mari maitiro kuburikidza achivhara panze evasingatombonamati chinangwa uye provable chokwadi. Last asi kwete kumuduku, mumwe anogona kuona zvakajeka kuti Riksbank anokurudzira cashless nzira pamberi mari. Pano mumwe anogona kuwana kupfuura unyengeri munhau Swedish. Muenzaniso chinokosha kwazvo kuti zviri Riksbank uye hapana mumwe anenge asarudza kuvhara pasi
mari deposits. Ngationei kudzokorora Riksbank okuti kubva kumashure chikamu kujekesa "nokwawakarerekera" kubhengi wacho vainyengera.
On the Alliance hurumende akagadza Gavhuna Stefan Ingves akataura tsitsi kuti kupomerwa musi ATM withdrawals kuti kuderedza kushandiswa mari mu Sweden. Sei kuti mashoko iwayo pamwe pamusoro kwavakarerekera? Akaratidza kuti nemabhengi 'tsika mune dzimwe Nordic nyika chete kupomera munhu kushaya vachibhadharisa pakuchinja ATM withdrawals nezvimwe pane vatengi vavo vakanga kwakaderedza kushandiswa mari. Kuva kuripira yokubva mari yavo hazviiti. Pane Ichokwadi munyori uye kwete Ingves mhedziso.
Ingves akataura kazhinji uye nokuzvidira kana CIT akapakatira nekaviri pamusoro akawanda asi vaizeza uyewo kudoma zvokufananidzira ndivo nokuramba zvikwereti uye debit makadhi Internet kubiridzira. Ko kwazvakarerekera? The Riksbank ane kwemakore kuisa mberi musoro pfungwa kuti privatization Mari Kutarisira rakagadzirirwa "kukurudzira kukuru makwikwi uye chigadzirwa kukura." Kufunga ndohwavakadai iri vemabhizimisi uye hakuna nzira imwe eSosaiti inokosha moyo mabasa. Ko zvichida moto injini panguva yakasiyana moto dzemapurisa kumhanya kubata kune moto, zvakare? The chiteshi ane nguva kutanga kuti inobhadharwa ukuwo vamwe vachava kubva mari. The moto injini zvirire kuti Max.
"Against ichi nechekumashure, tinotenda kuti matanho kusimbisa mari mamiriro yepamutemo nyoro havana kufarira elaboration ane njodzi uye vakarongeka muripo gadziriro."
The kunosimbisa dzinoitwa ne munyori unotara Riksbank kuti inotyisa kufanana imwe mari kambani kana zvimwe private opareta ari indasitiri. Iwe nyora kuti mitemo inofanira kuratidza chokwadi.
Chokwadi ndechokuti vamwe netsvakurudzo kuti vanhu vakawanda masere kubva gumi kuda mari utariri muitiro kuchawedzera. Cash The pamutemo inofanira pachinzvimbo achasimbiswa. Pfungwa yokuti 'musika "riri ezvinhu zvose nesimba vakabata kuti shamwari zvekufungidzira mbudzana kuti vakagara chinhu Pachigaro nhandare. The musika kuti zvine musoro kureva vatengi asi shoko rinomirira, mune tsika, makambani vachadaro.
Sezvo vazhinji vanoda mari zvakanaka kuwedzera munhu anofanira kuteerera ruzhinji. Asi zvinoita sokuti munhu ane "musika" nani kureva zvebhizimisi. A Central Bank hakufaniri somunhu mari kambani voga. A Central Bank inofanira kutibatsira evanhu basa kuti private nemauto haungatongogoni kurarama zvinoenderana. Naizvozvo, haufaniri kushandisa mutauro rwevharanda private zvekutepfenyura. mhando iyi "zvechizarira-mu" panguva mukuru kugamuchirwa mari ndicho chinhu chakanakisisa chingagona kuitika Swedish usapinde hurongwa.
Nokuda kuonekwa anopa Bank ane nezvechisarudzo kupa mari kuti mutemo unoti pamutemo. Asi iwe unogona kuona zvakajeka mundima iyo nzira vanokotamira. Cash Legality anogona nyore kubviswa nenzira kunze, makondirakiti uye zvibvumirano. Heino Riksbank kuchengetedza mari pamusika. Kuwedzera matambudziko (kwete kushandiswa) mari anofanira kuva "zvikuru uye saka kukanganisa
vanhu vazhinji kumusika kuipa '(kuti kuita chimwe chinhu nezvazvo).
Izvi zvinoreva kuti tsika, kuti kuenzanisa, kuti kana Russia paricharwisa Sweden ane duku County hapana kodzero kudzivirira nekuti hazvina kukanganisa vanhu zvakakwana. Society anoedza kuzorora pamwe dziviriro kwakakodzera dzakadai dzemadzinza vashoma kubva rusaruraganda kwakadaro. Izvi zvinoitika nokuti muenzaniso nemapurisa uye siyana hurumende zvirongwa. Asi ichi chinoshanda
Hazviratidziki "mari vashoma". Panyaya iyi ndiyo Riksbank pachayo se "musaruraganda" kana kana uchida kuti chete kumira uye vanofarira kutambudzika panguva vatorwa akatendeuka ropa uye pasi pasina kunyange kudana mapurisa kana amburenzi.
Riksbank pacharo rinoti tsitsi kuti haripi chero kudzivirira vatengi uye vanotambudzika mapoka (tichitarisa wokushandiswa mari). Mapoka aya kuteerera nokuda okudzvinyirira pamahombekombe zvachose. Vanoti mishomanana kuti kukwanisa kubhadhara mari ikoko cashless nzira haisi kuwanikwa. Pasinei vamba dzinopikisana vanoti pane ruzhinji vakarayira kuti kudzora uwandu mari uye kwete Riksbank. Sei Munoda here?
Chinhu zvatinozvisarudzira, hapana nzvimbo nokuda Riksbank kuti Mindset. Zviri zvakawanda nezvevaya vasina kodzero kuvhura rokubhengi kushandisa mari. Against izvi wakatangwa kubva "zvakanangwa zviyero". Mweya gwaro iri kuti mari iri "nderechinyakare" uye DZEMUNHU DZINODZORA kukura apo dambudziko zvine musoro pane zvinofanira kuva pamusoro cashless chisarudzo chiri okudzvinyirira.
"Market vatambi, kusanganisira mhuri, vane mari zvose mari yavo uye dzimwe muripo nzira, uye naizvozvo tinofanira kuva akasununguka kusarudza bhizimisi pamusoro izvo muripo nzira yokushandisa kwavari."
"Kubva zvoupfumi maonero sokuti debit kadhi kuti isingadhuri pane mari kubhadhara kwazvo korona 20." (Hapana uchapupu)
"Kunyange zvazvo Riksbank pachake tsvakurudzo anoratidza kuti chiverengero mari kwema zvinoderedza, zvakaoma nechokwadi kuti zvakadaro."
Mumwe inoti zvino kuti mhuri pachavo vanofanira kukwanisa kusarudza muripo nzira vanoda kushandisa. Zvichakadai, kare
kupokana kuti chete nemamwe mapoka vanofanira kodzero yokushandisa mari. Zviri akanyatsorevesa zvose kuti Riksbank vanofanira kusarudza zvinhu zvokutengeserana. Ipapo vanhu vateerere. The ichocho sapamazuva hwoudzvinyiriri.
Panewo imwe rondedzero kuti inogona kuverenga pamusoro Riksbank kuti Website inonzi 'Cash kana kadhi. Tinofanira kubhadhara? '. Chinonziwo rakanyorwa vashandi vaviri panguva Riksbank. The yambotaurwa Segendorf uye Thomas Jansson. Izvi hazvisi chinokosha nokuverenga rondedzero iri unilaterally nezvezvandaifanira mari. Asi zvimwe zvinhu zvinokosha pane kutaura nezvazvo. Zvinotora yakawanda makadhi pamusoro mari nokutaura kuti makadhi debit inofanira kushandiswa zvikuru kwazvo kuderedza mari. Zvinonzi aronga kutora "yakajeka uye mutengo anotsanangura mhosva." Izvi zvinoreva iyi akapoteredza kuti mashoko akanaka kureva mari iri mari kubhadhara. The Riksbank anokurudzira zvizere läpinäkyvä Pricing kubhadhara azvidavirire makadhi nyasha uye kuparadzira kushaya mari kuti ATMs.
Sound tsvakurudzo kunoratidza kuti mari zvinodhura. Izvi zvave kuchengeteka indasitiri. Zvinonzwisisika kuti nharo aizokwanisa kugara ikoko. Asi zvakakosha kuti dzinoratidza Riksbank wacho overwrought kutsvaka of "Zvakanyanya Kunaka Panguva Yepamuviri upfumi". It anoedza kuratidza pamwe calculators nematafura ari pachikumbaridzo iyo inotaura kuti zvinobatsira kushandisa makadhi. Zvinonzi mune zvimwe nepedyo vaitaura kuti 70 Korona aizova muganhu apo inofa kushandisa makadhi. The Riksbank wakanganwirawo kumwewo akataura kuti uyu muganhu kuti debit makadhi aizova kuruoko 20 korona, ukuwo runoenzanirana kukosha mbiri yaizova korona 450.
Zvichida imwe nzira inoshandiswa mune zvematongerwo enyika zvakare? Munhu kuwana pamusoro 500,000 korona vasati mutero vanofanira kuvhota kuti "Dick mudzvinyiriri". Avo mari pamusoro mari iyi inofanira kuvhota kuti "Sture Prime Minister". "Dick dhikiteta" ndiyo imwe pfungwa yakaipa nguva dzose, pasinei upfumi. Kontantlöshet anogara ari lousy kumwe.
Zvinonzi akaratidza kuti vose mari uye nhoroondo anotsanangura (verenga cashless) kubhadhara vane upfumi akamboona. In mashoko evasingatombonamati kwoupfumi, hapana kuramba kuti kutaura. Zvakawanda munharaunda iri Kuderera Kukosha pamwe yakawanda. Dambudziko nderokuti Akaroromesawo mari kuti marwadzo chipingamupinyi akabvisa upfumi avo akamboona. Kutaura mari kuti zvinodhura kunaka muchirevo chechinyorwa chino. Kudai hafu mari, hafu cashless kubhadhara aiva kuenzanisa zvakakodzera zvingadai zvakaitwa.
Mune dzimwe nyika dzakadai Hungary, apo rinoshandiswa mari zvikuru sezvo iri mari avhareji mari muripo yakaderera chaizvo. Inogona kuenzaniswa motokari. zvichadaro
yekudyidzana yepamusoro mileage kana iwe chete kuvadzinga 50 thousand aine motokari pagore, ichienzaniswa 1,000 thousand. Cash chichiri yakachipa pashiri. Asi enyika, mabhengi, kadhi makambani, mapurisa, zvitoro uye vanyengedzwa vanhu vazhinji munhuwo vakaita mari yacho makwikwi rakadzika nokuti chii izvi rakabatanidzwa yakagadzirirwa echikwereti kukura.
The ipapo Gavhuna Ingves akaratidza nezvimwewo zvirevo pfungwa kuti muripo zvose vanofanira kutakura dzavo mari. Zviri nyore kutaura kana iwe vauraya mari utariri muitiro zvokuti varasikirwa ayo upfumi pamwero uye saka inorwara wakaiswa mari yakawedzera zvakasimba. Akakurudzira mutsva deregulated private mari yokugadzirisa nayo kumabhengi kwokutanga kutarisira kushandisa hurumende mari zvakanaka chete nechinangwa kurega kufarira mhosva husiku. The mabhanga, mune tsika, haana kubhadhara basa vakabayira.
Pane befog uchitsoropodzwa asi mumwe anogona chete vafunga maviri. The private mabhanga vaiva zvikuru ratyama uyo akashandisa hurongwa kusvika Max. The Riksbank haana kuita zvakakwana pamusoro ezvinhu nokuda kusaita zvinhu nomazvo, irresponsibility uye kusada. Zvose zvinoratidza zvakajeka kuti marudzi ose mabhanga (kusanganisira Riksbank) kuti kuderedza mari. ipapo voga mabhanga ganda zvamaimbova kuburikidza kunyanyisa kushandisa mari zvakanaka. Ndicho chikonzero chikuru nokuda vachiti mari asiri kutakura vayo mari. Ndiyo mabhanga 'mhosva.
Pane chinoratidza kuti mabhanga kuti nokukurumidza kurega kushandisa maitiro nenzira dzakasiyana panguva cashless kuzvipedza. No chinhu. Zvinofanira Riksbank kunzwisisa. The yapfuura kunyanya kushandisa mari yokugadzirisa nayo inoratidza kuti munhu haagoni kuvimba dzakavanzika mabhanga kutora basa. vakomana vakawanda vanokurira kuva mutoro vakura vanhurume. Banks hazvitongoguti vakura. Havana kurega swiping kubva kudzayi chirongo vari.
In chambotaurwa nezvacho bepa aiti kuti kadhi muripo zvinotora paavhareji 25 masekonzi kupedza apo imwe mari ditto zvinoda 26 seconds. Ko nyaya yechipiri? Zvakadini musoro nharo mhando? Kana kutengeserana inoguma PIFFLE kuti mutengo imwe
chigadzirwa kune 995 pane musoro SEK 1000 saka kuponesawo nguva yakawanda ari ikozvino mumasekonzi saka oerhärt inokosha. The makuru mari anotora nguva yakareba kuti kubhadhara mari iri Chokwadi nyaya Chokwadi sezvo zvakawanda mabhiri kuti vaverengwe. Zvakanaka apo ngaakuitirei havazovi shoma.
Izvi "vakarasika mumasekonzi" zvechokwadi kupfuura upenzi nharo kontantlöshet andaisangana nawo panguva basa mubhuku. Izvi akanyatsotevera nemashoko okuti masendi matanhatu paminiti zana vakarasika nokuda skimming pa ATMs. Pane kupfuura ini boggles panguva sei zvakaipa nharo kontantlösheten kuva? Kana munhu anotora mari Via ATM ose zuva gore saka yokungotaura kurasikirwa SEK 22 nokuda skimming. Sezvo kontantlösheten hanya zvikuru pamusoro masendi, ndiko zvakarurama mugumisiro 21,90. Oh zvinokosha sei kuti "mutopota ndiye kwaya" uye "Chechipiri Hunokosha Moment".
Regai panzvimbo ndikuudzei nezvenguva zvinonyatsokosha. Maererano Stockholm restaurateur Bengt Sörås vanoribvisa panzvimbo indasitiri ake 35- 40 masekonzi mari nokuda kadhi sechinhu mari muripo anotora mumasekonzi gumi. Pane Zvisinei huchinje. Pamwe nekurutsa kuti maererano kuva zvinoverengeka zana metres naye kana munhu wose kuti mari kubudikidza kadhi. emabhawa zhinji uye zvakafanana mumaguta makuru kubvuma chete mari.
The yambotaurwa 22 (urombo 21,90) korona zvichienzaniswa avhareji 8.000 wakachena purofiti kuti mabhanga fleecing isu pagore pamunhu, kana guru inopfupikisa yavanowana nechikwereti kadhi. Ndinoshuva sei unogona kudzoka nguva saka takanga tichiri kubhadhara hamvuropu pamwe mari muruoko. Ipapo ndingadai kunyange kuva neakaundi yokubhengi asi zvose "pasi metiresi". In ichi nostalgic hope Muchiitiko, makambani anofanira kuitawo saizvozvo. Just vane mari pachavo njodzi yavo. Zvichida kuviga mari iri tabhu nevabereki vake sezvo Bert Karlsson akaita kare. Mugumisiro ichi yaizova kuti paisazova mabhanga.
Chokwadi uye kusunungura pfungwa. Pashure chishamiso ichi mupfungwa zvichiitika, tava kudzokera nyaya.
Unorevei nemashoko kuti rataurwa yechipiri? Inomhanya ichidzika cashiers zvachose? Regai yevashandi counter kushanda zvakanaka pandaida uye kwete kumhanyirira kuti rufu. Regai kutaura seconds. The zvakataurwa kuisa yunifomu mitengo streamline mari kubhadhara kwakafanana nyore sezvo echimurenga. A mukaka angadai mari nekorona gumi zvakaenzana uye kwete 9,90. Hangaiwa pamahedhifoni achaita mari 300 zvakaenzana uye kwete 295. The zvakaipira zvakanaka kuti vamwe wretches mune zvokutengeserana pazvipfuwo nehana kana zvakadaro kuchinja ringave vakashinga. Tariro iri chibhende matauriro pachena mundima. Zvichida kana mari kubhadhara kurova cashless mumasekonzi anoverengeka chete nokuda kwechikonzero.
Chimwe chinhu iwe vasingawanzotauri pakuziva kuti bhizimisi rine vanosungirwa nomutemo aone zvinhu zvakati wandei zvine chokuita kukodzera uye kururama kwemashoko kutenga kubudikidza kadhi rokubhengi. The kadhi anotarira kuti zvakaongororwa hologram uye Logo. Customer kuti siginicha uye ukoshi nguva kadhi kuongororwa. Ndiani anoita pamaitiro chidhiraivho izvi? Uyezve, chero chiratidzo ndakaongorora. Cash haana zvinoda kuzivikanwa uye vari anenge zvisingaiti kuumba.
Kana zviri pamutemo zvaida checkings vakatevera kunyatsochengeta ari kadhi kutenga haazombotaurwi apo yechipiri sezvo nokupenya uye chikatsiviwa shoma mumasekonzi kurasikirwa azvidavirire makadhi chinetso. Mutemo zvinowanzoda zvinhu tsika kutevera. Asi chete kuwedzera duku chidhiraivho aizoita kadhi kutenga akanga nomumugwagwa kwaitora nguva zvikuru kupfuura mari kutenga.
Zvadaro, zvichipomerwa mupepa kuti mari inoshandiswa pamatunhu papi. Kuburikidza Taut kunyora pamusoro nezvikumbaridzo uye nguva kunotsigirwa munhu akarongeka girafu "akaratidza" kuti ndizvo zvazviri. It anototi kutaura kuti mutengo akatsunga zvakakwana panguva inoitika kubhadhara. Masvomhu zvokuti zvakaoma vanokweverwa kumuganhu pamusoro kutenda mashura zvapambira kana quasi-vezvitendero. Mumwe haagoni kuzoratidza upenzi zvakakwana pamusoro kuchengeteka indasitiri nekusimba kuti mari kubhadhara ndivo yakachipa pashiri. Asi regai kuti pfungwa mutambo kuti Riksbank rworudyi. Kuti zviri isingadhuri mari nokuda kadhi pamusoro imwe ukoshi.
Ko vatengi vanobatsirwa nayo? Zvinonzi vaidavira kuti kumaresitorendi aizochinja menu zvavo kuti pittance? Dai Grocery injini vachinje mitengo avo kuchangotanga? Kwete kunyange Riksbank zvakanaka pane chinhu saka musoro. The chokwadi ndechokuti pane kazhinji kuti matanho apo mari yakawanda rinobatanidzwa haripi chero kuti munhu anzwe kana anogona kuva nomugumisiro zvachose. Tax cheka somuenzaniso. The makambani mazvita ndinokutendai uye kuwana vatengi hapana musiyano chinokosha. Ko mumwe tengesa rusununguko rwake munguva yemberi kushandisa makadhi kuponesa munhu kana masendi maviri pazuva, izvo Tsika fungidziro upfumi?
Zvinoitawo proposes "nzira dzisinganyatsooneki zvinosuruvarisa maitiro" (sna. Nudging) azvidavirire makadhi nyasha. Ichi chinhu asi wakachena brainwashing. Vanofanira zvakadaro vose wakatangwa muna Yaunoti hweruzhinji? Vanofanira yeSweden kuputirwa mune vorudzii "chikwereti musasa kadhi" saizvozvo zvinoitika pamwe mukuru yokusvika hurumende hwoudzvinyiriri? vagari Sweden vaiti kodzero kudzora uwandu mari munharaunda iri chokwadi chinhu kupfuura vanobvuma kuputirwa ne Riksbank.
Izvi, mudikani Gavhuna wangu asina kuzvisarudzira kana ravo chisarudzo. National Bank prides pachayo iri kwayo "Zvaifungidzirwa yakarurama." Havafaniri kunyange kunzi Zvaifungidzirwa nekuti zvose inobva Riksbank dzaro cashless ilk yedare netsiva kudzora kukura cashless mirayiridzo. Hazvina maturo kuti "Zvaifungidzirwa" kubudirira kuburikidza muchaungudza zvitinakire vemo. mapepa maviri aya aiva rokupedzisira uswa. Ini Ndizvo kuzivisa yepamutemo gutsaruzhinji Swedish kuti vakafa. The Riksbank kuti udzvinyiriri anofanira kuva pachena vagari vanoziva nzvimbo yavo.